FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA : Ho fantatra tsy ho ela ny anaran’ireo olona ambony voarohirohy
Dosie miisa 12 izay mahavoasaringotra olona ambony teto amin’ny Firenena no efa voadinika teo anivon’ny Kaomisionin’ny Fitsarana ireo olona ambony (HCJ) eny amin’ny Antenimieram-pirenena. 18 février 2021
Tsy ho efa dia hampahafantarina am-pahibemaso ny anaran’ireo olona nahazoana dosie ireo mba hisian’ny mangarahara, hoy ny fanazavana.
Taratry ny fampanjakana ny Fitondrana tsara tantana sy ny ady amin’ireo tsy matimanota ny tsy fanavahana ny fanasaziana ho an’izay rehetra nanao ny tsy nety teto amin’ny Firenena. Miroso amin’ny fanatanterahana izany ny Fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy misy ho afa-bela fa na Filoham-pirenena teo aloha, na Praiminisitra sy ireo nitana andraikitra ambony rehetra teto amin’ ny Firenena dia tsy maintsy hotsaraina ka handray ny valin’ny nataony avokoa.
Antontan-taratasy miisa 12 mirakitra ny fitoriana an’ireo olona ambony nitondra teto amin’ny Firenena no efa voadinika teo anivon’ilay Kaomisionin’ny Fitsarana misahana olona ambony eo anivon’ny Antenimieram-pirenena. Raha tsy misy indray ny fiovana dia hampahafantarina am-pahibemaso mandritra ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena, ny volana mey, ho avy izao ny anaran’ireo olona ambony ireo izay voarohirohy tamin’ny fanodinkodinana volam-panjakana, hoy ny nambaran’ny filohan’ity vaomieran’ity. Mba hisian’ny mangarahara eo amin’ny Firenena no anton’izany, hoy izy, ary matoa efa vita fanadihadiana teny amin’ny Bianco sy ny Pac dia azon’ny vahoaka fantarina tsara izany. Marihina fa efa indroa nahemotra ny tokony handinihan’ireo Solombavambahoaka ny amin’ny hanenjehana na tsia an’ireo nahazoana dosie saingy nahemotra hatrany izany noho ny tsy fahafenoan’ny fetran’isa.
Ilaina ny fandanian’ny antsasa-manilan’ireo Solombavambahoaka mantsy vao manan-kery ny fahafahana manohy ny fanenjehana an’ireo olona ambony ireo. « Ny asanay Kaomisionina efa vita fa miandry ny fivoriana izay handaniana azy isika. Ny lalàna mametraka fa tsy maintsy ao anatin’ny fivorian ara-potoana irery ihany no ahafahana mandinika izany dosie izany. Eto aho dia miantso ny Depiote rehetra mba ho tonga hivory handany sy hahafantarana ny hevitsika. Ny fandaniana an’io dia mila ny antsasa-manilan’ny Depiote ka isaky ny mivory izahay dia ampy foana ny isa », hoy hatrany ny fanazavana. Ankoatra ny raharaha fanodinkodinana volam-panjakana dia anisany nahazoana fitoriana ihany koa ny raharaha fanondranana andramena an-tsokosoko.
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1792) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (45) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021